I-China i-logo eyenziwe ngezandla ezenziwe ngamabhokisi okuhombisa ngebhokisi yamaphepha kunye noMvelisi | Huaguang
I-logo eyenziweyo eyenziwe ngesandla yeLifa leMpahla yokuLungisa iBhokisi yokuhombisa ngeMirror Ityesi yomsesane webhokisi yobucwebe
Umququzeleli weBhokisi yobucwebe nge Mirror
Ubukhulu: ngentando yakho
Ukwenziwa kunye nokuveliswa kweebhokisi zezacholo kusekwe ekuyilweni kobucwebe. Ingaphakathi ngokubanzi lenzelwe ngezithuba ezininzi ukunqanda ukukrwela okungafunekiyo okubangelwa kukudibana nobucwebe. Ezinye iibhokisi zobucwebe ziyahluka kubume bangaphakathi ngokweemilo ezizodwa kunye nezinto. Ukusetyenziswa okuphambili kwibhokisi yobucwebe, ukugcina ubucwebe obuhlala buhleli njengempembelelo entsha, kuthintela uthuli kunye namasuntswana emoyeni kumjelo wobuso bezinto zokunxiba kunye nokunxiba, kwaye unike nabaqokeleli bezacholo bathande indawo elungileyo yokufumana.
Ihlala igcwele izinto ezithambileyo kwaye iqulethe i-anti-oxidation kunye ne-anti-wear fibers ukuthintela ukunxiba kobucwebe. Isitshixo okanye indibaniselwano yokutshixa kwesitayile esihambelanayo sinxitywe ukukhusela ubucwebe. Ibhokisi yobucwebecwecwe ikakhulu yenzelwe abantwana ukuba baqokelele izinto ezincinci, ke akukho latshi. Ibhokisi yobucwebecwe bePhepha, inobuhlobo ngakumbi kokusingqongileyo, ixabiso lilunge ngakumbi. Uyilo olupinki luhambelana nentliziyo yentombazana encinci, ngokungathi yile bhokisi yobucwebe, yintombazana entle entle. Le ngqatyana yebhokisi incinci incinci, kodwa inayo yonke imisebenzi eyimfuneko:
Eyilelwe ukukhusela nokukhusela iringi yakho exabisekileyo, iphedi yesazinge ihlala ineeseti zemigca yeplanethi yeepaneli yesiponji. Ukongeza kwindandatho, ii-cufflinks okanye amacici nawo lukhetho olufanelekileyo.
Umngxunya wokulungisa umsesane / umsesane wokulungisa icici usetyenziselwa ukulungisa kunye nokukhusela izixhobo zakho zamacici. Ihlala inikezelwa ngemingxunya yamacici kwisahlulelo sokubamba icici, okanye ngemicu yeeshelfu yokugcina icici usebenzisa indawo yokugubungela ibhokisi, okanye ngesikhuseli esisuswayo esinemingxunya yamacici egumbini.
Ikhadi lebhabhathane eligubungela iphedi ihlala i-flannelette enekhadi lebhabhathane elakhelwe kwigumbi lokugubungela ubucwebe bakho obuxabisekileyo. Amakhadi ebhabhathane anokusetyenziswa kuphela njengokubambelela, kodwa anokusetyenziselwa ukusonga iintsimbi zakho ezinde nezibhityileyo ukukhusela ukutyibilika okungahleliwe; Okanye yenza njengomaleko, wahlula ii-trinkets zakho phezulu.
Isisongelo sokubukela / isongo esongelweyo senzelwe ukukhusela kunye nokukhusela isongo sakho okanye iwotshi.
Ikhonkco lomqala lisetyenziselwa ukukhusela kunye nokukhusela isongo sakho somqala, esihlala sikwimo yokubamba okanye yokubamba. Oku kulandelayo kuhlala kulungiswa ngesingxobo se-elastic esivulekileyo ukuze ubambe isacholo somqala.
Iityhubhu zenziwe ngobukhulu obahlukeneyo kunye neemilo, ukuze ubucwebe bakho obuxabisekileyo bubekwe bodwa. Imixokelelwane emide nebhityileyo idla ngokwenzelwa imigexo yomqala, ngelixa ezikwere ziyilelwe izacholo, iibrukhwe, amacici, izikhonkwane zeenwele, iikhofu kunye nezinye izinto ngokuxhomekeke kubungakanani nomthunzi.
Yeyiphi intombazana encinci engayithandi ibhokisi yegugu enje?
Egqithileyo Ibhokisi yokudlala yabantwana ibhokisi yekhadibhodi enesiphatho
Okulandelayo: Ibhokisi yokugcina iOfisi okanye iphepha elinomthamo omkhulu inokugoqwa
Iibhokisi zoGcino lweKhadibhodi
Ibhokisi yobucwebe ebhalwe igama lomntu
Iibhokisi zeZipho ezincinci
Ibhokisi yeZipho zewayini
Iibhokisi zekhadibhodi yobucwebe beZinto eziBalulekileyo
Iibhokisi zekhadibhodi yokubumba okanye ibhokisi yobucwebe nge Mirror ...
Ibhokisi yobucwebe bePhepha elihonjiswe ngesandla elenzelwe ngesandla